Customer Account No : *
Unpaid Bill List :
• Please kindly settle the unpaid bill invoice first, before you make advance payment.
• ကြိုတင်ငွေပေးသွင်းရန်အတွက် ပထမဦးစွာ လူကြီးမင်းတွင် ကျန်ရှိနေသော ဘေလ်ကြွေးကျန်အား အရင်ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
(Only for Advance Payment)
Cash On 5BB Showroom
Show 5BB Showrooms
Advance Payment For Months : *
အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရရှိပါသည်။
ပေးဆောင်ရမည့် amount မှာ MMK ဖြစ်ပါသည်။
Get free usage.
The amount to be paid is MMK.
Advance Payment Terms and Process
Advance Payment များကို Customer များအနေဖြင့် 5BB Showroom များ, KBZ Pay, KBZ (Mobile Banking), CB (Mobile Banking), AYA (Mobile Banking), Wave Pay, Sai Sai Pay, One Pay ,Mandalay Smart Pay (MSP) များအသုံးပြု၍ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
Customer များသည် မိမိတို့ပေးဆောင်ထားသော ချလန်များအား ဓာတ်ပုံရိုက် (Screen Shot) ပြီး Viber 09403438511 သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပေးပို့မှသာလျှင် စစ်ဆေးပီး သက်တမ်းထပ်မံ တိုးမြှင့်ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Promotion များအရ Free Months များအပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
Customer များသည် ကြိုတင် ပေးဆောင်ထားသည့် ကာလအတွင်း Plan Downgrade, Disable or Terminate များပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။အချို့သော အခြေအနေများကြောင့် Disable or terminate ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ကြိုတင်ပေးချေထားသော ငွေကြေးများအားပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။
Customer များသည် ကြိုတင်ပေးဆောင်ထားသည့် (3,6,12 Months) ကာလပြီးဆုံး၍လည်းကောင်း၊ ဆက်ပီး အသုံးမပြုလို၍လည်းကောင်း၊ လိုင်းအားယာယီပိတ်သိမ်းမှု (Temporary) နှင့် အပြီးပိတ်သိမ်းမှု (Terminate) 5BB Sales Office & Online Form များ လျှောက်ထားပီး ပိတ်ထားရမည်။
ယခင် Bill ဘေလ်ပေးဆောင်ရန် ရှိသော Customer များအနေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည့် Bill တစ်လစာနှင့် ပေးဆောင်ခွင့်ပေးထားသော Due Date အတွက်ကျသင့် Bill များအား ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။